बी.पी.का उत्तराधिकारीहरु धर्मको नाममा अलमलिनु हुँदैन - हिमाल दैनिक
आज बी.पी. हुनु भएको भए उहाँले हामीलार्इ भन्नु हुने थियो होला, ‘स्यावास तिमीहरु आज मेरो योग्य उत्तराधिकारी भएछौँ, यतिले पुगेन अगाडि बढ’
२७ भाद्र २०७५, बुधबार १९:४७
बी.पी.कोइरालाको देहान्त भएको झण्डै ८ वर्षपछि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा गणेशमानसिंहको आँगनबाट कम्युनिष्टहरुसँग मिलेर आन्दोलन सुरु भयो र नेपालमा प्रजातन्त्रको पुर्नबहाली भयो।
तर, नेपालमा लेनिन, स्टालिन वा माओेको पालाका कम्युनिष्ट छैनन््। अहिले उनीहरु एक ढिक्का भएर बसेता पनि हामीले राजनीतिक र कार्यनीतिका दृष्टिकोेणले कम्युनिष्टहरुसँग व्यवहार गर्दै जानु पर्ने अवस्था छ अहिले पनि छ र भोलि पनि गर्दै जानु पर्ने अवस्था फेरि आउँछ।
पार्टीभित्र द्धन्द्ध र संघर्ष हुन्छ। कोहि व्यक्ति कहाँ उभिएको हुन्छ, कोहि कहाँ उभिएको हुन्छ। त्यस क्रममा तिम्रो कुरा गल्ती छ, तिम्रो तर्कमा आधार छैनन् भन्न सकिन्छ। आज हाम्रोे प्रमुख राजनीतिक शत्रु कम्युनिष्ट हो। कहि होइन हाम्रो प्रमुख शत्रु मधेसवादी दल हो अथवा त्यो पनि होइन राप्रपा हो भन्ने कुरा पनि आउन सक्छ। तर, यो कुरा बी.पी.ले भन्नु भएको थियो, त्यो सुवर्णले भन्नु भएको थियो भन्नु एकप्रकारको कठमुल्लापन हो। आफ्नो अनुभवमा आधारित भएर काम गर्नुकोे सट्टा शास्त्र पल्टाएर गरेजस्तो हुन्छ।
अर्को, नेपाली राजनीतिमा बारम्बार उठिरहने विषय हिन्दु धर्मको बारेमा हो। हिन्दु धर्मका शिलशिलामा त्यस समय तपाइहरु धेरैलाई त्यो नाम थाहा छैन होला प्रेमकुमारी पन्त भन्ने एकजना पत्रकार हुनुहुन्थ्यो। उहाँको विक्ली मिरर भन्ने चर्चित पत्रिकामा बी.पी.ले स्पष्टसँग भन्नु भएको छ ‘राजाले हिन्दुधर्म भन्नु झेला हो।’
२००७ सालको अन्तरिम संविधानमा हेर्यो भने पनि हिन्दु धर्म उल्लेख थिएन। राजा महेन्द्रले विस्तारै चोरबाटोबाट घुमाउँदै २०१९ सालमा धर्मलाई संविधानमा घुसाए। तत्कालिन अवस्थामा उनले हिन्दुत्व घुसाउनुको मुख्य उद्देश्य सोझै हिन्दुस्तानको नेहरु परिवारलाई रिझाउनका लागि थियो।
अहिलेको परिस्थिति बदलिएर गएको छ। अहिले पनि हिन्दुत्वको कुरा छ। आज बाबुराम भट्टराइको वक्तव्यमार्फत रहस्योद्घाटन भएको छ। हिँजो (शनिबार) एक मञ्चमा भन्नु भयो रे, ‘हामीलाई हिन्दु राज्य राख्न भारतले दबाब दिएको थियो। त्यो दबाब नमानेको कारण नाकाबन्दी भयो।’ कसैले दबाब दिन सक्छ। तर, यसरी नेपाललाई हिन्दु राज्य राख्न भारत, चीन अथवा अमेरिकाले त के तीनवटै महादेश आएर दबाब दिन्छन् भने पनि हामीले यो सिद्धान्तत गलत हो भन्न सक्नु पर्दछ।
यहाँ दबाब दिनेहरुले आफ्नै देशमा गरेर देखाउन न त। भारतमै यत्रो ठूलो हिन्दुवादी पार्टी छ भने किन धर्म निरपेक्ष भनिराख्नु पर्यो? भारतलाई नै हिन्दु राज्य बनाएर देखाए भयो नि। त्यसैले हाम्रा नेता, प्रधानमन्त्री वा भावी प्रधानमन्त्रीका आकांक्षीहरुले उनीहरुलाई आफ्नै मुलुकमा गरेर देखाए भयो नि भन्न सक्नु पर्दछ।
मध्ययुगीन समयमा क्याथोलिक र प्रोटस्टेन्टबीच भयंकर झगडा थियो। क्याथोलिकका सर्वेसर्वा रोमका पोप थिए। इसाई धर्मको तीनवटा विभेद छ। एउटा अर्थोडक्स चर्च जुन रसिया, ग्रीस र टर्कीमा थियो, अर्को प्रोटेस्टन्ट जर्मनीमा प्रमुख थिए भने क्याथोलिक्स फ्रान्समा। उनीहरुबीच वर्षौँ लडाई भयो। पछि फ्रान्सका क्याथोलिक्स चर्चका सर्वेसर्वा र राजा नाबालिक भएकोसमय प्रशासकीय प्रमुख कार्डिनल रिसुलले एक प्रोटेस्टन्ट राजाको मद्दत लिएर अर्को क्याथोलिक्स बाटो समाए। वेस्टफेलियाको सन्धी भयो। त्योे सन्धीमा धर्मका नाउँमा, जातका नाउँमा, रक्त सम्बन्धका नाउँमा परिभाषित राज्यमा अर्को राज्यले हात हाल्न पाउँदैन भन्ने मान्यता स्थापित गरियो। त्यसैले अहिले एउटा हिन्दु राज्यले अर्कोलाई हिन्दु राज्य बनाउछु भनि हस्तक्षेप गर्न पाउँछ? यो १७ औं शताब्दि अघि सामूहिकीकरणको विश्वव्यापी मान्यता थियो।
सबैभन्दा ठूलो आधुनिक युगका चर्चित लेखक हेनरी किसिंजरको ‘द न्यू वल्ड अर्डर’ भन्ने पुस्तक छ जुन कार्डिनल रिसुललाई सम्मान गर्दै सुरु गरेका छन्। उनी भन्छन्ः जबदेखि वेस्टफेलियाको ट्रिटीले नेशन÷स्टेटको अवधारणा बनायो त्यसपछि हाम्रो डेमोक्रेसी सुरु भयो। अर्थात धर्मका आधारमा आधुनिक राज्य बन्न सक्दैन। धर्मका नाउँमा राज्य बनाउँ भन्ने महावीर कोहि छन् भने उनीहरुले पहिले आफ्नै देशमा बनाएर देखाउनु अनिमात्र नेपाललाई उपदेश दिउन। जुन देशले धर्मको आधारमा राज्य बनाएका छन् त्यी विस्तारै समाप्त हुँदै गएका छन्। प्रश्न यो धर्म र अधर्मको होइन, मुख्यतय राज्य के का आधारमा बन्छ भन्ने हो। राज्य सिन्द्धान्तका आधारमा बन्ने हो। त्यसैले नेपाली कांग्रेसले यसमा अलमलिनु हुँदैन र कांग्रेसले राज्यका सिद्धान्तलाई लिएर अघि बढ्नु पर्छ।
अहिले सबैभन्दा ठूलोे खतरा नेपालमा नागरिक स्वतन्त्रतामा छ। यो खतरा अहिले नै आयो भन्ने होइन तर, कानुन र विधानको सिद्धान्त के हो भने, तपाई कहाँ उभिनु भएको छ भन्ने कुरा प्रमुख होइन, तपाईको वर्तमान कदमले कता संकेत गर्दैछ भन्ने महत्वपूर्ण होे। अहिले म तपाईअघि उभिएको छु केहि बिगार गरेको छैन। तर, हल्का भुकम्प आयो भने म तपाइहरुतिर हानिन्छु पछाडि जान्न। आज वर्तमान सरकार जहाँ उभिए को छ त्यसका बारेमा बी.पी भएको भए के भन्नु हुन्थ्यो?
यसबीचमा प्रधानन्यायाधीश लगायतका विभिन्न विषयमा थुप्रै कुरा भए। ब्रिटिस शासनले भारतमा अदालतको प्रारम्भ गरेको दिनदेखि कहिल्यै पनि त्यहाँको वरियताक्रम मिचिएको थिएन। पहिलो पटक १९७३ मेइ महिनामा ३ नम्बरमा रहेका ए एन रायलाई इन्दिरा गान्धीले प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरिन। त्यसपछि उनीभन्दा माथिल्लो वरियतामा रहेका दुई न्यायाधीशले राजीनामा दिए। त्यस समय जपप्रकाश नारायणले विरोध गर्दै वक्तव्यमा ए एन रायलाई प्रधानन्यायाधीश बनाएर इन्दिरा गान्धी कहाँ उभिएकी छिन् होइन, कता हेदैछिन् भन्न प्रश्न गरेका थिए। त्यसको ठिक २५ महिनापछि सन १८७५ जुनमा भारतमा इर्मजेन्सी लाग्यो।
आज जसरी सरकार अघि बढिरहेको छ यहाँ समाजवाद र क्रान्तिका कुरा छोडिदिनुहोस्, सबैभन्दा ज्यादा चासो र चिन्ताको विषय भनेको के नागरिक अधिकार सुरक्षित रहला? भन्ने गम्भिर प्रश्न उठेकोछ। अहिले नेपाली कांग्रेस र आफूलाई बी.पी. कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमान र महेन्द्रनारायणका अनुयायी हुँ भन्ने र उनीहरुलाई सम्झिने मानिसले उहाँहरुले के बोल्नु भएको थियोे भनि शास्त्रमा खोज्ने होइन र छैन। वर्तमान सरकारका अधिनायकवादी रवैयाहरुको खिलाफमा एक जुट भएर साथ दिने सबैलाई साथ लिएर यो प्रवृत्तिलाई औल्याएर भन्नु परेको छ। चाहे माइतीघर मण्डलाको प्रकरण होस् वा विदेश यात्रा गर्न लागेको कुलप्रसाद कोइरालालाई फर्काएको प्रसंग होस्, यसविरुद्ध बोल्नु पर्दछ। अब माले एमालेको सरकारले कोेइराला थर भएकोलाई फर्काएको होला भनेको त कम्युनिष्ट युवा लेनिन विष्टलाई पनि फर्काएछ। बी.पी.को सिंगो जीवन हेर्नु भयो भने उहाँले जहिले पनि व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई महत्व दिनु भएको छ। त्यसैले जो स्वतन्त्रता, समानताको पक्षधर छन् र बन्दुकको विपक्षमा उभिएका छन् उनीहरुले सोच्नु पर्छ कि स्वतन्त्रताको पक्षधरसँग हतियार हुन्छ कि हुँदैन अथवा राजासँग घाँटी जोडिन्छ कि जोडिदैन, आरक्षण आउँछ कि आउँदैन?
मानवजाति स्वतन्त्रबाट स्वतन्त्रतर हुने यात्रामा छ। झनझन समान हुने यात्रामा छ। त्यस यात्राका क्रममा कसले के भन्यो भन्ने नसोचौँ। एउटा प्रसंग सम्झिन चाहन्छु। जब योगेन्द्रमान शेरचन जेल परे त्यतिबेला उनी बडोे प्रसन्न भएको कुरा उनले आफ्नो डायरीमा लेख्नु भएको छ। । ठूला ठूला अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातीप्राप्त नेतासँग सँगै जेलमा बस्न पाएको छ। जेलमा कति नै बसौँला र? ९/१० वर्षपछि त छुटिएला नि। त्यसपछि जेलमा बसेर प्राप्त गरेको सारा ज्ञान र जानकारी विश्वविद्यालयबाट सोधपत्र तयारीमा आउनेका लागि पनि उपयोगी हुन सक्छ। तर, उहाँलाई जेलमा पुगेपछि थाहा भयो कि हाम्रा नेतालाई त चुनाव गराउने र आफू मन्त्री हुने बाहेक केहि पनि आउँदो रहेनछ। योगेन्द्रमानको यो निराशा पनि गलत थियो।
कुनै पनि नेताले तपाईलाई ठाउँमै त कहाँ पुर्याउन सक्छ? त्यसैले मैले भनेको छुः ‘रहवर राह मुसाफिरको दिखा देता है, मन्जिल पर पहुँचाए जरुरी तो नही।’ शेरचनजीको निराशामा पनि आशा थियो जसको कारण उनी लड्दा लड्दै शहिद हुनु भयो।
हात्तीको कथा भन्दा बी.पी.को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक नीति, गान्धीवादी विचार जस्ता प्रत्येक कुरामा सकारात्मक र नकारात्मक कुरा खोज्न सकिन्छ। जब बेलायतमा चर्चिल प्रधानमन्त्रीबाट हटे फुर्सदको समयमा थियो। पुनः प्रधानमन्त्री भइहाल्ने अवस्था पनि थिएन (अहिले हाम्रो शेरबहादुर र रामचन्द्रजीलाई जस्तै)। उनले त्यो फुर्सदको समयमा पेन्टिङ बनाउन थाले। उनलाई के सुर चल्यो कुन्नि त्यो पेन्टिङमा के के नराम्रो छ टिप्पणी गर्नुहोेस भनि पार्टी कार्यालयको गेटमा लगेर छाडिदिएछन्। एउटा आयो नाक खराब, अर्कोले के खराब अर्कोले के भन्ने गरेपछि वाक्क भएका चर्चिलले पेन्टिङ नै गर्दिन भनेछन्। त्यहि बेला एक बृद्धाले भनिछन्, कुन कुन नराम्रो होइन कुन कुन राम्रो भयो भन न भनेपछि सबैले राम्रो भन्न थालेछन्। त्यसैले बी.पी.को कुरा गर्दा राम्रो नराम्रो भन्दा पनि उहाँले गरेको त्याग, तपस्या र संघर्ष मात्रै हेर्नु परेको छ।
बी.पी.ले कहिल्यैपनि आफ्नो स्वार्थका लागि काम गरेनन्। अत्यन्त अप्ठ्यारोमा परेर सकिन लागेको पार्टीलाई पनि हिन्दुस्तानबाट नेपाल ल्याउनु भयो। कुन घडिमा बी.पी.ले के भन्नु भयो त्यो समाउने होइन। आजको उपलब्धी बी.पी.ले तयार पारेको जगमा प्राप्त भएको हो। यो उपलब्धीले पुगेको छैन। हामी धेरै अगाडि बढ्नु परेको छ। यसरी अघि बढ्ने क्रममा अतितलाई कोट्याएर हुदैन।
बी.पी.ले हरेक नेपालीको अलिकति जग्गा, एउटा दुहुनोे गाई होस् भनेको कुरा अहिले जस्ताको तस्तै गर्छु भनेर हुँदैन। त्यसको मर्म के थियो भने गाउँमा अर्धवेरोजगारी छ। मानिससँग काम छैन, पिउने पानीका लागि घण्टौँ हिड्नु पर्छ भन्ने हो। श्राद्धमा विरालोे बाँधेकोे जस्तो गर्नु हुँदैन।
आजको देश, काल, परिस्थिति अनुसार हामीले नेपाललाई नयाँ युगमा पुर्याउनु परेको छ। धेरै थरीका मान्छेले बी.पी.को नाउँ भँजाएर नेपाली कांग्रेसलाई बद्नाम गर्न थालेको हुँदा आखिरमा एउटा कुरा भनि टुंग्याउन चाहन्छु।
अहिले नेपालमा विकासको कुरा भइरहेको छ। ठूला ठूला विकासको कुरा। तपाईहरुलाई थाहा छ विकासको कुनै पनि मोडल विना कर्जा आउँदैन र सफल हुँदैन। कर्जाकै कारण आज श्रीलंका डेब्ट ट्रयापमा परेको छ। चीनसँग अहिले भयंकर ज्यादा पैसा छ। उसले जो कोहिलाई ऋण दिन खोजीरहेको छ। विश्वका ८ वटा देशहरु उसका करिया भएका छन्। नेपाल पनि त्यहि बाटोमा जाँदैछ। त्यतिबेला बी.पी.ले भन्नु भएको थियो हामी विदेशी प्रविधि भन्दा पनि ज्यादा आफ्नो श्रमको उपयोग गर्नु पर्छ। हामीले बी.पी.को त्यो कुरा सुनेनौँ। हामीले हाम्रो श्रमको उपयोग गर्ने अवस्थामा गाई, भैंसी अथवा कृषिको उपयोग पनि गर्नु पर्ने हुन सक्थ्यो। त्यसलाई हामीले पक्रेर नेपालको गाउँ गाउँमा रोजगारीका अवसरको श्रृजना गर्नु पर्ने थियो। आज झण्डै ५० लाखको संख्यामा विदेशीएका युवालाई स्वदेश फर्काउने कुरा बी.पी.को एक एक पंक्तिमा थियो। त्यहि शिलशिलामा उहाँले भन्नु भयो कि हामीले अमेरिकाको विकासको मोडल लिएर हुँदैन।
त्यसैले बी.पी.लाई सम्झिदा उहाँका दुइवटा कुराः एउटा उहाँले कानुनको शासन र नागरिक स्वतन्त्रताका लागि गरेको लडाई, हिन्दुस्तानमा इन्दिरा गान्धीले लगाएको इर्मजेन्सीभित्र बस्नु भन्दा राजाको जेलमा बस्न उहाँले गरेको निर्णयलाई सम्झिउँ। अर्को उहाँले अघि सारेकोे विकासको मोडल जुन चीन र अमेरिकाको प्रविधिमा चल्ने हवाइजहाज थिएन, बरु कुटिर उद्योग थियो। रोजगारीलाई प्राथमिकता दिने खालको विषय थियो। अरु कुरा पक्रेर हुँदैन। बी.पी.को जीवन ज्वलन्त त्यागको जीवन थियो। उहाँले कहिल्यै पनि आफ्नो घरवार जोड्नु भएन। भाइको घरमा जीवन विताउनु भयो। जुन घरमा उहाँ बस्नु भयो, त्यसलाई हामी कोइराला निवास भन्छौँ, त्यसको महिमा गर्न उहाँ चुक्नु भएन। उहाँको सादा जीवन उच्च विचार थियो। उहाँका बलिदान र उत्सर्गलाई ध्यानमा राखेर हामी आज यो अवस्थामा उभिएका छौँ। आज बी.पी. हुनु भएको भए उहाँले भन्नु हुने थियो होला, ‘स्यावास तिमीहरु आज मेरो योग्य उत्तराधिकारी भएछौँ, यतिले पुगेन अगाडि बढ।’
अहिले पनि हामी अगाडि बढ्नका लागि मधेसको प्रश्न जीउँदैछ। जसले त्यति ठूलो मूल्य चुकाएर संविधान संशोधनको प्रयास गर्यो उसैलाई अहिले पनि आफूलाई मधेसवादी भन्ने पार्टीहरुले कांग्रेस मधेस विरोधी भन्दैछन्। कुनै पनि सवालमा हामी अरु भन्दा कम छैनौँ। के कति कारणले हामी मधेसको चुनावमा पछि पर्यौँ त्यसमा विश्लेषण हुन सक्छ। तर, हामी कोहि भन्दा कम छैनौ भन्ने कुरा बी.पी.का रचनामा पनि भेट्न सकिन्छँ। बी.पी.ले १५ सालमा बनाएको मन्त्रिमण्डल हेरे हुन्छ। अन्त्यमा बी.पी.लाई सम्झने क्रममा एउटा शेर सम्झिन चाहन्छुः जमाने भरका कोही इस कदर अपना हो न जाए कि अपनी जीन्दगी आपसे बेगाना हो जाए।
(बी.पी. कोइरालाको १०५औ जयन्तीको अवसरमा नेपाली कांग्रस केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा कांग्रेसका विश्लेषक एवं नेता प्रदिप गिरिद्धारा व्यक्त विचारको सम्पादित अंश)
Prevपछिल्लोकिर्ते मुद्दामा फरार पक्राउ
अघिल्लोपहिरोमा परेका दुईको मृत्युNext